Make.TV Live Video Cloud ကိုယခု Google Cloud Platform တွင်တပ်ဖြန့်ထားသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ယခု Google မှမိုးတိမ်ပလက်ဖောင်းပေါ်ချထား Make.TV တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုတိမ်တိုက်
ယခု Google မှမိုးတိမ်ပလက်ဖောင်းပေါ်ချထား Make.TV တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုတိမ်တိုက်
ဆီယက်တဲလ်, WA - စက်တင်ဘာလ 10, 2019 - Make.TV, မိုဃ်းတိမ်၌တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုအားကိုင်တွယ်ရန်သတင်းများ, အီလက်ထရောနစ်အားကစား, အားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်ခေါင်းဆောင်များကအသုံးပြု, အမ်စတာဒမ်အတွက် IBC 2019 မှာ Google မိုးတိမ်နှင့်အတူ၎င်း၏ပူးပေါင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ Make.TV'' s ကိုတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုတိမ်တိုက် (LVC) ကို Google မိုးတိမ်ပလက်ဖောင်းပေါ်ချထား (GCP), ထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်မှု workflow နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များရှင်းလင်းလွယ်ကူစေရန်ခွင့်ပြု Google Cloud ရဲ့ beta ကို streaming များ APIs များကိုပေါင်းစပ်။ ကို Google Cloud ကိုအဖော် Pavilion မှာကုမ္ပဏီနှစ်ခုတိုက်ရိုက်အားကစားထုတ်လုပ်မှုအသုံးပြုမှုကိုအမှုပေါင်းများစွာဖွင့်ဖို့ GCP အပေါ် running LVC သရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။
LVC တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုနှင့်ဆက်နွယ်အချိန်, သယံဇာတနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရဖြေရှင်းပေးရန်, စကေးမှာတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုတက်ကြွစွာစောင့်ကြည့်မှု, လမ်းကြောင်း, မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနိုင်ပါတယ်။ programmer တွေ, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်မည်သည့်အဆင့်အကြောင်းအရာကြေညာသူကအလွယ်တကူရှိပြီးသားသို့မဟုတ်အသစ်သတ်မှတ်ထားသော IP ကို ​​Workflows သို့ဝေးလံသောဘဏ်ဍာနှင့်လမ်းကြောင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအချက်ပြမှုများကိုထောကျပံ့အလျင်အမြန်အကြောင်းအရာဆည်းပူးနိုင်ပါတယ်။
တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုတိမ်တိုက်တံဆိပ်ထောက်လှမ်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အား Google Cloud ရဲ့ beta ကို streaming APIs များကိုပေါင်းစပ်, GCP များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်။ ဤရွေ့ကား APIs အားထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေတွေအတွင်းမှာချုံ့ချဲ့စားသုံးမိခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းမီးမောင်းထိုးပြ, signal ကိုရှာဖွေမှုများကိုအဘို့အရေးအတွက်နှင့်ခြွင်းချက်-based စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် resolution ကိုကးသရုပ်ပြနိုင်ပါသည်။
Make.TV အတူတူဆောင်ခဲ့အတွက်သော့ချက်ဖက်စက်သင်ယူမှုအပြောင်းအလဲနဲ့, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစုစည်းနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေတွေတစ်အရေအတွက် GCP ၏ထိပ်ပေါ်မှာအသိဉာဏ်ဖြန့်ဖြူးဖြေရှင်းချက်အသက်ရှင်နေထိုင်နေပါတယ်။ LVC မွေအခြေခံအဆောက်အအုံသို့မဟုတ်ဗိသုကာများက unencumbered သောမိုဃ်းတိမ်ကို-ဇာတိပူဇော်သက္ကာကိုမီဒီယာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးဒေါင်လိုက်ဖြတ်ပြီးဖောက်သည်ပူဇော်နိုင်ပါတယ်ဘယ်အရာကိုတင်ဆက်ပေးတယ်။
ယောသပ်သည် Hopkins ၏ CRO Make.TV, ကျွန်ုပ်တို့၏ LVC ဖြေရှင်းချက်ယခု Google မှမိုးတိမ်ပလက်ဖောင်းပေါ်ပြေးနေသည်နှင့်ကျွန်တော်သိသိသာသာကမ္ဘာတဝှမ်းတိုက်ရိုက်အားကစားထုတ်လွှင့်များ၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်များတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက်ပေါင်းစပ်ရာပူဇော်သက္ကာ၏စွမ်းရည်ပြနိုင်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ် "ဟုပြောသည်။ ပလေးအောက်ကိုပစ်မှတ်များနှင့်စုစည်းမိတ်ဖက်ဖို့ input ကိုသတင်းရင်းမြစ် routing မှစ. Google Cloud ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက် signal ကိုသွင်းအားစုနေပုံကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါရန်, IBC 2019 LVC အပြည့်အဝအလားအလာသရုပ်ပြဖို့အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ရမယ်။ "
Make.TV IBC မှာပြပါလိမ့်မယ် ခန်းမ 14, မတ်တပ်ရပ် 14.A24နှင့်လည်းရှိနေခြင်းကို Google Cloud ကိုအဖော် Pavillion အပေါ်ရပါလိမ့်မယ် မတ်တပ်ရပ် 14.E01 ခန်းမ 14 ၌တည်၏။ Make.TV'' s ကို CRO ယောသပ်သည် Hopkins တနင်္ဂနွေ, 15 ကနေစက်တင်ဘာလ 1th ပေါ်မှာရပ်ကို Google မှာတင်ပြပါလိမ့်မယ်: 00 pm တွင် - 1: သူဆွေးနွေးကြမည်ရှိရာ 20 pm တွင်, မိုဃ်းတိမ်မှ signal ကိုရှာမှီးခြင်းနှင့်လမ်းကြောင်းရွေ့လျား.
ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC က Ultra HD ဖိုရမ် 2019-09-10
ယခင်: မြက်ချိုင့်နှင့် NEP ဗြိတိန် IBC 2019 မှာအိုင်ပီရဲ့ Power ခင်းကျင်းပြပေးပါရန်
နောက်တစ်ခု: Bitmovin Microsoft က Azure အပေါ် encoding ကများနှင့်ကစားသမားဖြေရှင်းချက်၏ရရှိမှုကိုကြေညာ